LibreOffice आदेशहरूका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू मानाङ्कन गर्छ वा सम्पादन गर्छ, वा LibreOffice आधार मयाक्रोहरू ।
तपाईँ सबै LibreOffice अनुप्रयोगहरूका लागि मानाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ वा हालको अनुप्रयोगका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू सम्पादन गर्नसक्नु हुन्छ ।
मानाङ्कन गर्दा अवैध सर्टकट कुञ्जीहरू जुन तपाईँको सञ्चालन प्रणालीद्वारा हालै प्रयोग गरिएका छन् ।
LibreOffice अनुप्रयोगहरू. सबैलाई साझा सर्टकट कुञ्जीहरू प्रदर्शन गर्छ.
लेखक Calc इम्प्रेस रेखाचित्र गणित
हालको LibreOffice अनुप्रयोगका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू प्रदर्शन गर्छ ।
सहयोगी आदेशहरू र सर्टकट कुञ्जीहरू सूची बनाउछ्छ । प्रकार्य सूचीमा चयन गरिएको आदेशको सर्टकट कुञ्जी परिमार्जन गर्न वा मानाङ्कन गर्न, यो सूचीमा एउटा सर्टकट क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछिपरिमार्जन गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रकार्य कोटिहरू र LibreOffice प्रकार्यहरू सूचीबद्ध गर्दछ जुनमा तपाईँले सर्टकट कुञ्जीहरू मानाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ ।
उपलब्ध प्रकार्य कोटिहरू सूचीबध्द गर्छ । शैलीहरू लाई सर्टकटहरू मानाङ्कन गर्न, खोल्नुहोस्"Styles" कोटि ।
तपाईँले एउटा सर्टकट कुञ्जी मानाङ्कन गर्न चाहेको एउटा प्रकार्य चयन गर्नुहोस् सर्टकट कुञ्जीहरू सूचीमा एउटा कुञ्जी संयोजनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि परिमार्जन गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस् यदि चयन गरिएको प्रकार्यसँग पहिल्यै एउटा सर्टकट कुञ्जी छ भने, यो कुञ्जीहरू सूचीमा प्रदर्शित हुन्छ ।
सर्टकट कुञ्जीहरू प्रदर्शन गर्छ जुन चयन गरिएको प्रकार्य मानाङ्कित छन् ।
ले प्रकार्य सूचीमा चयन गरेको आदेशलाई सर्टकट कुञ्जीसूचीमा चयन गरिएको संयोजन कुञ्जी मानाङ्कन गर्छ ।
एउटा अघिल्लो पटक बचत गरिएको एउटा सर्टकट कुञ्जी सहित कन्फिगुरेसन बदल्दछ ।
हालको सर्टकट कुञ्जी कनफिगुरेसन बचत गर्छ, त्यसैले तपाईँ यसलाई पछि लोड गर्न सक्नुहुन्छ ।
LibreOffice कन्फिगर गर्दा
Title is: कुञ्जीपाटी